DVDStyler: Yemahara uye yepamuchinjikwa-chikuva app yeDVD yekugadzira uye kunyora | Kubva kuLinux
Hazvina mhosva Operating system ngatishandisei, tese isu pane imwe nguva takamboda gadzira DVD nyanzvi-inotaridzika, ndokuti chifukidzo uye menyu, Pakati pezvimwe zvinhu uye / kana zvivakwa. Naizvozvo, panguva ino isu tichaongorora nezve DVDStyler.
DVDStyler iri yemahara uye multiplatform application ye Kugadzirwa kweDVD uye kunyora. Izvo zvinotibvumira kuti tigadzire zviri nyore DVD neiyo kutarisa kwehunyanzvi izvo zvinowanzodiwa.
DVDStyler chishandiso chine kukura kwakamiswa, ndiko kuti, kwayo yazvino vhezheni yakagadzikana rakabudiswa pa 19 / 05 / 2019. Asi ichiri yakagadzikana vhezheni, yakakura (inoshanda / inoshanda) uye inowanikwa mune mazhinji ezvinyorwa zve GNU / Linux Distros. Ndicho chikonzero nei isingakwanise kudzingwa seapp inobatsira munhu wese.
Mumwe muenzaniso weyakagadzikana asi wekare kunyorera iyo ichiri kurarama zvinoenderana nezvinodiwa ndeye DVDisaster, yatakataura kare, makore mazhinji apfuura. Naizvozvo, isu tinokoka avo vanofarira kuti vaone yedu yakaburitswa yakabatana ne DVDisaster kana enda wakananga kune yako webhusaiti link pa sourceforge, iyo ichiripo.
"DVDisaster chishandiso chakagadzirirwa kudzoreredza data kubva kune anotyaira madhiraivha, angave ari maCD, maDVD kana maBlu-Rays. Kwete chete iyo inotibvumidza isu kuti titore ruzivo, isu tinogona zvakare kutarisa mamiriro emadhisiki, negirafu iyo inotsanangura mamiriro avo." Tora zvakare data kubva kumaCD ako kana maDVD ane Dvdisaster
Tora zvakare data kubva kumaCD ako kana maDVD ane Dvdisaster
1 DVDStyler: Yemahara uye multiplatform app
1.1 Chii chinonzi DVDStyler?
1.2 Ruzivo runoshanda
1.3 Dzimwe nzira
DVDStyler: Yemahara uye multiplatform app
Chii chinonzi DVDStyler?
Zvinoenderana neyako zviri pamutemo webhusaiti, inotsanangurwa seinotevera:
"DVDStyler ndeye yemahara, yekuyambuka-chikuva DVD yekunyora yekushandisa iyo inogonesa vanofarira vhidhiyo kugadzira mahunyanzvi-anotaridzika maDVD. Iyo yemahara software yakapihwa pasi peGNU General Public License (GPL)."
Saka, ne DVDStyler tinogona kubva zvakapusa pisa mavhidhiyo mafaira kuDVD yekutamba kuri nyore uye nekukurumidza pane chero DVD player kusvika gadzira tsika dzeDVD menyu kuravira kwedu uye tinoda kubata izvo zvakanyorwa zvirimo.
Zviri nyore kushandisa uye inouya nemidziyo yakapusa uye epamberi maficha.
Inogona kushandiswa kugadzira uye kupisa mavhidhiyo kuDVD ine yakasarudzika yekudyidzana menyu.
Inotendera kugadzirwa kwemamenyu ekuona DVD, mabhatani uye mashandiro. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kugadzirisa iyo yekufambisa uye kuyera kwechero bhatani kana graphic chinhu chakaiswa mune akagadzirwa mamenyu.
Iyo inotsigira ingangoita ese makuru vhidhiyo uye odhiyo kodhi kugadzira uye kurekodha chero faira. Kunyanya, inoenderana neAVI, MOV, MP4, MPEG, OGG, mafomati eWMV, pakati pevamwe. Inopawo rutsigiro rwe AC-3, DivX, Xvid, MP2, MP3, MPEG-2, MPEG-4, pakati pemamwe maodhiyo nevhidhiyo.
Iyo ine rutsigiro rwe multicore processor. Zvakare, iyo yakanyorwa muC / C ++ uye inoshandisa iyo wxWidgets graphic toolkit inoita iyo chikuva yakazvimirira. Chikonzero nei, iri multiplatform (GNU / Linux, Microsoft Windows uye MacOS).
Kuti uwane rumwe ruzivo, iwe unogona kuwana iyo yepamutemo webhusaiti ye DVDStyler en sourceforge. Kunyange uchinyatso kudzidza kuti ungashandise sei, unogona kuwana iyo dzidziso yepamutemo muSpanish kudzvanya rinotevera link.
Mamwe akafanana emahara uye akavhurwa mafomu anogona kuva:
Vhura DVD Producer
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «DVDStyler», inonakidza uye ichiripo yazvino yemahara uye multiplatform application inoshandiswa kugadzirisa kugadzirwa uye kunyora maDVD edu; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » DVDStyler: Yemahara uye yepuratifomu app yekugadzira uye kunyora kweDVD
Inotaridzika zvakanaka kwazvo. Makore mashoma apfuura zvaizove zvakanaka kwandiri, asi mazuva ano ndinorekodha zvishoma zvinhu paDVD / Blu-Ray. Icharamba ichichengeterwa ziso. Ndatenda nechinyorwa uye kurudziro.
Zvakanaka, hazvidiwe kurekodha pane CD / DVD / BluRay, nekuti chishandiso ichi chine mukana wekuchengetedza izvo zvakaitwa mu .iso fomati; Iyi ndiyo yandinotumira kune vatengi vangu pavanonditumira kuyera mapikicha nemavhidhiyo kuitira kuti vataridzwe pamakomputa avo (uye kare pamaDVD players).
Pindura kune willalfangom
Kwaziso, kuda. Ndatenda nekomendi yako uye mupiro wenyaya.
Kwaziso, eJoagoz. Ndatenda nekomendi yako uye tinofara kuti wakafarira application application